Global Voices teny Malagasy » Serbia: Ampiakarin’ny Manam-pahefana Fitsaràna Ny Mpikatroka Mafana Fo Iray Mitaky ny Ronono Ara-pahasalamàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Desambra 2014 7:26 GMT 1	 · Mpanoratra Danica Radisic Nandika Tantely
Sokajy: Serbia, Fahalalahàna miteny, Fahasalamàna, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Taokanto An-dàlambe any Novi Sad, Serbia. Sary an'i molimonster69  ao amin'ny Flickr.
Nantsoin'ny mpitandro filaminana ny mpampiasa Twitter iray hafa any Serbia, mba hiseho any amin'ny fitsaràna noho ny fikatrohany tao anatin'ireo tambajotra sosialy sy amin'ny “fiainana tena izy”. Voasaringotra tanatin'ireo hetsi-panoherana tamin'ny Martsa 2013 i Marko Živkovic avy any Belgrade, izay nanohitra ny fanapahankevitry ny governemanta hampiakatra ny fatranà “aflatoxine”  azo ekena ao anatin'ny ronono sy ireo vokatra azo avy aminy namboarina sy miditra ao amin'ny firenena.
Io maraina io, niantso ahy ny mpitandro filaminana mba hilaza amiko fa manana taratasy fahazoan-dàlana hitondra ahy any amin'ny fitsaràna izy ireo noho ny #MlekoUp  (#MilkUp). Maherin'ny 20 vola aty aoriana, izao no vokatry ny Raharaha “Aflatoxine”.
Metabôlita mahafaty ny “Aflatoxine”, izay vokarin'ireo karazanà olatra sasany ary mety hita ao anatin'ny ronono sy ireo sakafo hafa. Hatreo aminà fatra iray voafaritra  dia tsy mitera-doza ny fihinanana azy ireo. Ny taona 2013 anefa ny governemantan'i Serbia dia nanapa-kevitra ny ampiakatra ireo fetra ara-dalàna amin'ny fatran'ny “aflatoxine” hita fa tsy mampidi-doza ao anatin'ny ronono, izay 0,05 ka lasa 0,5 mikrograma isaky ny iray kilao. Nitarika ireo olon-tsotra sy ireo mpanamboatra vokatra sasany hangataka fanazavàna feno momba io fanovan'ny governemanta io ilay fampitomboana avo folo heny tanatin'ny fotoana vitsy monja an'ilay fatra nekena teo aloha, ary ho an'ny sasany kosa dia nitarika hetsi-panoherana izany fanapahankevitra izany.
Nanao hetsi-panoherana tamim-pilaminana ny vondrona kely iray hanoherana ny fanapahankevitra mikasika ny fampitomboana ny fatranà “aflatoxine” ao anatin'ny ronono any Belgrade, ny volana Martsa 2013. Sary tao amin'ny Istinomer .
Niverina tamin'ny fanapahankeviny ny governemanta  taorian'ny teritery nahazo azy tanatin'ireo volana voalohandohan'ny taona 2013, nataon'ireo olon-tsotra, ireo fikambanana tao an-toerana, sy ny Vondrona Eorôpeana , izay nampitandrina an'i Serbia fa tsy afaka hiditra any amin'ny ankamaroan'ny faritr'i Eorôpa intsony ireo vokatra amboariny, satria 0,05 mikrograma isaky ny kilao ihany ny fatranà “aflatoxine” azo ekena anatin'ny ronono ao amin'ny Vondrona Eorôpeana.
Voasaringotra tanatin'ireo hetsika anaty media sosialy manohitra ilay fanapahankevitry ny governemanta i Živkovic, mpamorona rindram-baiko avy any Belgrade, ary nofidian'ireo olon-tsotra nanao hetsi-panoherana teo anoloan'ny foiben'ny Governemantan'ny Repoblikan'i Serbia  mba hitondra teny amin'ireo mpanao gazety amin'ny anaran'ireo mpanohitra, ny 1 Martsa 2013. Nilaza izao manaraka izao tamin'ny mpanao gazety i Živkovic tamin'izany fotoana izany:
Iray taona sy tapany taty aoriana, naharay antso mahasosotra avy amin'ny mpitandro filaminana i Živkovic, nampahafantatra azy fa ilaina izy, tsy hanontaniana ihany, fa hiatrika fitsaràna ihany koa. Tanatin'ireo bitsika hafa , nilaza i Živkovic fa tsy nilaza mazava taminy ny antony niampagàna azy ny mpitandro filaminam-panjakana niantso azy, fa hoe mila miseho any amin'ny fitsaràna izy noho ny tsy namaliany ny fangatahana azy ho tonga hohadihadiana mikasika ilay resaka malaza nopetahana anarana hoe “Raharaha Aflatoxine”. Nitaraina ny tsy nahazo izany fiantsoana lazain'ireo manam-pahefana izany moa ilay mpampiasa Twitter, talohan'ilay antso an-tariby.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/12/17/66021/
 Hatreo aminà fatra iray voafaritra: http://www.ansci.cornell.edu/plants/toxicagents/aflatoxin/aflatoxin.html
 Niverina tamin'ny fanapahankeviny ny governemanta: http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/453498/Potpisane-saglasnosti-za-vracanje-aflatoksina-na-005-mkg
 Vondrona Eorôpeana: http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/370251/EU-Srbija-da-vrati---nivo-aflatoksina
 olon-tsotra nanao hetsi-panoherana teo anoloan'ny foiben'ny Governemantan'ny Repoblikan'i Serbia: http://mondo.rs/a281275/Info/Drustvo/Protest-tviterasa-ispred-Vlade-zbog-mleka.html
 bitsika hafa: https://twitter.com/MarkoZvkvc/status/535804575161528320